ထိုင်းစတိုင် ငါးဖယ်ကြော် | Wutyee Food House
« ဘဲပေါင်း ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ
ဂဏန်း မာဆလာဟင်း »
April 23, 2012 by chowutyee ထိုင်းစတိုင် ငါးဖယ်ကြော်
၅။ စပါးလင် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ရ။ ကြက်သွန်ဖြူ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၈။ ပဒယ်ကော – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၉။ ပုဇွန်ခြောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ညက်အောင် ထောင်းထားပါ)
၂။ ငါးဖယ်ခြစ် – ၂၅ကျပ်သား
၄။ ငါးငံပြာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၅။ နံနံပင် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
ရ။ ပဲသီး – ၂ခု (အရှည် ပါးပါးလှီးပေးပါ)
၁။ ထိုင်းဟင်းအနှစ်တွင် ပါဝင်ပစ္စည်များ အားလုံးကို blender (ကြိတ်စက်)ဖြင့် ကြေညက်အောင် ကြိတ်ပေးပါ။
၂။ ပြီလျှင် ထိုင်းဟင်းအနှစ်များကို ခွက်တစ်ခုထဲထည့်ထားပါ။
၃။ ထို့နောက် ခွက်တစ်ခုထဲတွင် (ငါးဖယ်၊ ထိုင်းဟင်းအနှစ်၊ ငါးငံပြာရည်၊ ကြက်ဥ၊ နံနံပင်၊ သကြား၊ ပဲသီး) တို့ကို သမအောင် နုယ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် နုယ်ထားသော ၂လက်မအရွယ် အ၀ိုင်းပြားလေးများ လုပ်ပေးပါ။
၅။ ဒယ်ထဲ ဆီများများ ထည့်ပြီ ဆီပူလာမှ ငါးဖယ်များကို အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၆။ ငါးဖယ်များကို ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ပြီ အစာပြေအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါပြီ…
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 15 Comments	15 Responses
on April 23, 2012 at 4:01 pm | Reply Cho Wut Hmone
i always eat that one by cooking curry or putting in the soup but i bought ready made from chinese shop…small 10 pieces is liek 2.50 pounds… i will try to make it after diet…wanna eat now…
on April 23, 2012 at 4:25 pm | Reply chowutyee
haaa.. diet လုပ်လည်း စားလို့ရပါတယ်။ တခါတလေပဲဟာ…🙂
on April 23, 2012 at 5:06 pm | Reply ခင်ယမုံ
on April 24, 2012 at 7:53 am | Reply chowutyee
on April 24, 2012 at 12:45 am | Reply nandar
ညီမလေး ကြော်ထားတာကြည်ပြီးတော့ စားချင်လာပြီ….
on April 24, 2012 at 7:54 am | Reply chowutyee
on April 24, 2012 at 2:06 am | Reply khin thandar
sis if i cannot findပဒယ်ကော, can i make w/o ပဒယ်ကော ? is it nice to eat ?
on April 24, 2012 at 7:55 am | Reply chowutyee
Yeah you can Ma!🙂
on April 24, 2012 at 3:37 am | Reply လလေ
အရမ်းကိုကြိုက်တယ် ၀တ်ရည်ရေ ကျေးဇူးပါနော
on April 30, 2012 at 5:14 pm | Reply ထွန်းလွင်
စမ်းကြည့်လိုက်မယ် လက်တွေ့ မနက်ခင်း ကိုစပြီ
Plz try it! bro😛
on May 19, 2015 at 1:40 am | Reply winthandarkhaing
on May 19, 2015 at 1:41 am | Reply winthandarkhaing
အမထိုင်းစိုက်ကော်လားဘာလားတော့မသိဘူး အကင်တဲ့ အမလုပ်ပြပြီးတင်ပေးရင်သ်ိပ်ကောင်းမှာပဲ အမ ဒီမှာအဲဒါကို စားဘူးသူနဲသေးလားလို့သိတဲ့လူတောင်မရှိဘူး
on May 19, 2015 at 1:46 am | Reply winthandarkhaing
အမသမီးအဲဒါကိုလုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ် နောက်ပြီး အကင်မျိုးစုံကိုလုပ်ပြီးသားဝယ.်မစားချင်ပါဘူးအမ အမလိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီသန့်ရှင်းမှုရှိတာကိုယ်ပဲကိုယ်တိုင်လဲစားမယ် စီးပွားရေးလုပ်ရင်လဲ အများအတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမ ဒါကြောင့် အမအကင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့လုပ်နည်းလေးတွေအစုံတင်ပေးပါလားအမ